Ampidino GTA 5 (Grand Theft Auto 5) ho an'ny Windows
Ampidino GTA 5 (Grand Theft Auto 5)
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (175.36 MB)
Ampidino GTA 5 (Grand Theft Auto 5),
Rockstar, mpamorona ny andiany GTA, dia namoaka Grand Theft Auto 5, lalao farany aminny andiany GTA, na GTA 5 raha fintinina, ho anny PlayStation 3 sy Xbox 360 taminny septambra 2013.
Antsipirianny lalao GTA 5
Rockstar dia nanambara taminny fomba ofisialy taminny volana Jona 2014 fa hamoaka ny kinova PC aminny lalao aorianny kinova console, ary nanambara fa hamoaka ny kinova GTA 5 PC aminny fararanonny 2014, toy ny lalao GTA teo aloha. Ny kinova GTA 5 PC, izay andrasanny gamer, no hanombohany aminny maody GTA Online izay ampidininny mpilalao console aorianny famoahana ny lalao sy ny fanavaozana rehetra navoaka ho anny lalao.
Grand Theft Auto 5, izay manana izao tontolo izao malalaka indrindra aminny lalao novolavolaini Rockstar hatreto, dia misy fiovana mahery vaika raha oharina aminireo lalao teo aloha tao anatinity andiany ity. Ao aminny Grand Theft Auto 5 dia tsy mitantana mahery fo iray fotsiny isika. Nomena fotoana hitantanana mahery fo miisa 3 isika ary hifamadika aminireo maherifo ireo araka izay tadiavinay. Ny mahery fo tsirairay dia manana tantaram-piainana manokana sy ny fahaizany manokana. Ny zava-misy fa samy manana ny fahaizany ny maherifo dia mampisy fahasamihafana sy fientanam-po aminny lalao.
Ny fiavianireo maherifontsika ao aminny GTA 5, izay mitranga any aminny faritra Los Santos sy Blaine Country, dia ireto manaraka ireto:
Michael dia ex-con miaraka amina asa matihanina aminny halatra banky taloha. Manana fiainam-pianakaviana mikorontana, niverina taminny andro taloha tany aminny GTA 5 i Michael.
Trevor, iray aminireo mpilalao mahatsikaiky indrindra aminny lalao, dia psychopath izay tsy voaro aminny fiainana anaty loto ary manana hatezerana tsy voafehy. Ny zava-misy i Trevor izay namani Michael taloha dia manome azy anjara lehibe aminny tantara.
Franklin, izay miavaka aminny fahalianany aminny fiara, dia maherifo tanora izay mbola tsy nifandray firy taminny asa ratsy teo aloha. Niova ny fiainani Franklin rehefa nihaona tamini Michael izy ary niditra amina asa ratsy.
Grand Theft Auto 5 dia manome fahalalahana tsy mampino anireo gamer. Ao aminny tontolonny lalao malalaka dia azonao atao ny mampiasa fiara toy ny angidimby sy ny fiaramanidina jet, ary koa ny fiara an-tanety toy ny bisikileta, moto, fiara, bisy ary fiara mifono vy. Ho fanampinizany, aminny lalao GTA vaovao, tsy toy ny lalao teo alohanity andiany ity, afaka mitsoraka anaty rano koa isika. Izany no antony ilantsika mitandrina aminny antsantsa any aminny ranomasina.
Ny sary Grand Theft Auto 5 dia hohatsaraina aminny endriny PC aminny lalao. Raha ampitahaina aminny kinova PlayStation 3 sy Xbox 360 aminny lalao, ny fiasa toa ny fanohanana avo lenta kokoa, ny kalitao avo lenta kokoa ary ny fomba fijery misimisy kokoa no miandry antsika aminny lalao.
Ao aminny Grand Theft Auto 5 dia manana safidy fanamoriana marobe izahay hahafahantsika manamboatra ny maherifonay. Azontsika atao ny manangona akanjo sy kojakoja toy ny kiraro, short, pataloha, lobaka, t-shirt, satroka sy solomaso aminny lalao ary ampidiro ao aminny fitafiantsika. Toy izany koa, afaka manamboatra fitaovam-piadiana marobe isika.
Ny kinova PC anny Grand Theft Auto 5 dia ho avy miaraka amina fitaovana fanovana horonantsary izay hanampy anao hamorona sarimihetsika aminny alàlanny sary azonao aminny lalao.
Dingana fampidinana sy fametrahana GTA 5
Fanamarihana: azonao atao ny misintona Grand Theft Auto 5 aminny solo-sainao aminny alàlanny fidirana aminny kaontinao Social Club miaraka aminny fanampianny rakitra GTA 5 Setup. Raha te-hilalao ny lalao dia tsy maintsy nividy ilay lalao ianao ary nampandeha ny lalao taminny alàlanny kaontinao Social Club. Ho fanampinizany, nanolotra ny hevinay momba ny lalao vaovao ho tonga ao aminny lohahevitray izahay aminny rohy rehefa havoaka ny GTA 6.
Haben'ny rakitra: 175.36 MB
Fanavaozana farany: 27-06-2021
Aminny alàlanny fampidinana Mafia: Fanontana azo antoka dia hanana ny lalao mafia tsara indrindra...
Assassins Creed Odyssey dia navotsotra ho karazana lalao hetsika izay azo vidiana aminny Steam ary...
Ampidino ny Assassins Creed Valhalla ary hiditra aminny tontolo miroboka noforonini Ubisoft!...
Novokarinny orinasa Bravo Company LTD ho anny sehatra Android, Forces of Freedom dia lalao fidirana...
Detroit: Become Human dia hetsika mampientanentana iray, lalao neo-noir novolavolaini Quantic...
Counter-Strike 1.6 dia iray aminireo lalao malaza indrindra aminny andian-dahatsoratra...